Sii wadista Barashada Luqadda Dugsiga Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iyada oo barnaamijka ugu weyn ee gobolka ee Barnaamijka Luuqadda, Minnetonka wuxuu si gaar ah ugu diyaar garoobay inuu taageero himilooyinka ardayda Shiinaha iyo Isbaanishka.
Ku Saabsan Barashada Luqadda ee MHS
Fursadaha Sanadka Freshman
Meelaynta Sare iyo wixii ka dambeeya AP (fasalada 9-12)
Barnaamijka Diblooma ee Labada Baccalaureate ee Caalamiga ah (fasalada 11-12)
Ikhtiyaariyada Ikhtiyaariga ah ee Xulashada (fasallada 9-12)
Koorsooyin loogu talagalay Barteyaasha Afka Saddexaad
Koorsada Koowaad Syllabi
Iyadoo lagu saleynayo heerarka aqoonta, xiisaha, jadwalka iyo yoolalka, ardayda waxay dooran karaan inay qaataan hal ama laba koorso inta lagu jiro fasalka sagaalaad. Ikhtiyaariyada Farshaxanka Luqadda Af-Ingiriisiga waxaa ka mid ah qaadashada Luqadda AP iyo Dhaqanka ama Farshaxanka Luuqadda AP 9. Wixii ku saabsan Barashada Cilmiga Bulshada, ardaydu waxay dooran karaan inay qaataan Cilmiga Xirfadaha iyo Xirfadda Aadanaha, taas oo dabooleysa shuruudaha Daraasadda 9aad ee Cilmiga Bulshada.
Koorsooyinka AP ee Luqadda iyo Dhaqanka iyo wixii ka dambeeya AP ee Farshaxanka Luqadda Luuqadda waxaa la heli karaa illaa iyo fasalka 12.
Shahaadada Aqoonta Luqadda Adduunka ee Minnesota iyo Khatarta Labada-Luuqadood iyo Luuqadaha Badan ayaa loo sameeyay aqoonsi rasmi ah oo ay ka heshay gobolka Minnesota aqoonta luqadda marka lagu daro Ingiriisiga. Shahaadada waa la bixin karaa isla marka uu ardaygu muujiyo aqoonta heerka dhexe-dhexe; si kastaba ha noqotee, shaabadaha waxaa la siiyaa oo keliya qalin jabinta dugsiga sare. Shaabadooyin ayaa lagu daraa qoraalka arday kasta oo ka qalin jabiya dugsiga sare oo buuxiya shuruudaha sidoo kale waxaa lagu dari karaa diblooma.
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay si taxaddar leh ula socdaan natiijooyinka imtixaanka aqoonta ardayda si loo hubiyo in ardayda ay helaan magacaabista ku habboon.
Waxbadan ka baro Xirmooyinka Labada luuqad
Xaga hoose iyo waayeelka, ardayda Immersion waxay dooran karaan inay qaataan IB Language & Literature - Language A, Chinese or Spanish. Ardayda Isbaanishka waxay kaloo haystaan fursad ay ku qaataan IB Global Politics SL sannadooda yar ama weyn.
Barnaamijka Dibloomada Caalamiga ah ee Baccalaureate ee Dugsiga Sare ee Minnetonka waa koorso laba sano ah oo daraasad ah oo ka kooban lix qaybood oo manhaj ah. Ardayda Immersion-ka ee doorta inay sii wataan Barnaamijka Dibloomada oo buuxa waxay xaq u yeelan doonaan Dibloomada Labada-luqadood iyagoo dhameystiraya laba luqadood oo laga soo xulay Kooxda 1 (Suugaanta IB) iyadoo la siinayo abaalmarinta 3 ama ka sare labadaba AMA iyagoo dhameystiraya hal Group 3 (IB Cilmiga Bulshada) maadooyinka oo ku baxa luqad aan Ingiriisiga ahayn.
Fadlan booqo www.minnetonkaschools.org/IB si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo xaashida shaqada ee koorsada xulashada. Ardayda xiiseyneysa barnaamijka diblooma ee buuxa waa inay ku muujiyaan xiisahooda foom kooban oo khadka tooska ah ah ( www.minnetonkaschools.org/IB ) oo ay la kulmaan Iskuduwaha Barashada Sare ee MHS si ay ugala hadlaan xulashooyinka koorsada labada sano ah. Email u dir Laura.Herbst@minnetonkaschools.org ama wac 952-401-5897.
Marka lagu daro koorsooyinka sanadka oo dhan, waxaa sidoo kale jira hal-xilli-dugsiyeed bixinno xulasho ah oo labada qaybood ee Luqadaha Adduunka iyo Cilmiga Bulshada ah. Xulashada semester-kan waxay u furan yihiin ardayda quusinta ee fasalada 9-12, waxaana loo qaadan karaa “a la carte” si kasta oo ay u kala horreeyaan ama isugu darmaan fasallada kale ee Immersion-ka.
Ku dhex quusin VANTAGE. Kani maahan Koorsada Bilowga ah.
Gudaheeda VANTAGE, inkasta oo aysan ahayn koorso lasaadaashay, ardaydu waxay heli doonaan fursad
inay mararka qaarkood ku dabaqaan xirfadahooda luuqadeed ee bartilmaameedka ah Ganacsiga Caalamiga ah. Koorsadani waxay fursad u siineysaa ardayda quusinta si ay uga faa'iideystaan xirfadahooda luqadeed ee fagaaraha mihnadeed. Ardaydu waxay kaqeybqaadan karaan wadahadalada koox yar ee luuqada bartilmaameedka ah iyo waliba suurta galnimada maalinta HR ee laba luuqadlaha ah, halkaas oo ay ku yeelan karaan wareysiyo kuna dhameystirayaan resumeyga luuqada hadafka. Inta laga sugayo la-taliyaha iyo mashruuca isku-darka sannad-ka-sannad, waxa kale oo jiri kara fursado ah in la helo lataliyeyaal ku hadla labada luuqadood iyo dhammaystirka mashaariicda adeegsanaya xirfadahooda luqadeed.
Ardayda Gelida Imtixaanka waxay sidoo kale dooran karaan inay ku bartaan luqad saddexaad luqadda Calaamadaha Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka ama Isbaanishka.
Ardayda Immersion-ka ee fasalada 10-12 waxay fursad u heli doonaan inay ku safraan safarka uu dugsigu kafaalo qaaday ee Chile ama Shiinaha oo ay ku dhammaystiraan mashruuca daraasadda safarka.
Eeg Shiinaha Immersion Syllabi
Eeg Isbaanishka Bilowga Syllabi
Gallery Immersion Shiinaha iyo Isbaanishka
Guddoomiyaha Waaxda Afafka Adduunka
Katalogga Koorsada Diiwaanka Kaaliyaha
Daraasad cilmi baaris ah 2014 oo ku saabsan Dibloomada Labada-luqadood ee IB
Jidadka Manhajka Wax Lagu Baro
Barnaamijyada jaamacadeed waxay ku wajahan yihiin ardayga wax lagu barto
Eeg Webinar Immersion
Kordhi dabacsanaanta jadwalka
Qeyb ka mid ah koorsooyinka Tonka Online ayaa u oggolaan doona ardayda inay qaataan koorso semester ah xagaaga, ama ay qaataan koorso toddobaad inta lagu jiro sanad dugsiyeedka si loo kordhiyo dabacsanaanta jadwalka.